တန်ဖိုးဆိုတာ ရုပ်ရည်လှပခြင်းမဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားသာဖြစ်တယ် – Hlataw.com
သူမနာမည် မိုးစု။ ကျောင်းပြီးတော့ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်သည်။ ယောင်နောက် ဆံထုံးပါဆိုသည့် ထုံးစံအတိုင်း သူမ ချစ်သူနောက် အတူလိုက်နေသည်။ သူမက အလုပ်လုပ်ချင်သော်လည်း ချစ်သူက ခွင့်မပြုသဖြင့် အိမ်တွင် ကျန်ရစ်သည်။ အိမ်တွင်တော့ ယောက္ခမနဲ့အတူနေရသည်။ ယောက္ခမက ပင်စင်အငြိမ်းစားတစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် ကုလားထိုင်တွင်ထိုင်ကာ စာဖတ်နေသည်က များသည်။ ယောက်ျားကတော့ မနက် ရ နာရီထိုးသည်နှင့် အလုပ်ကို ဆိုင်ကယ်နှင့်သွားသည်။ ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းတွင်အပ်၍ လိုင်းကားတဆင့်ပြန်စီးရသည်။ အလုပ်ရောက်ဖို့ပင် ၂ နာရီလောက်ကြာသည်။ ထိုအခါ အလုပ်က ပြန်လာလျင်လည်း နှစ်ဆင့်ဖြစ်နေသည်မို့ ည ရ နာရီလောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်သည်က များသည်။ ယောက်ျားအလုပ်က တခါခါ နယ်ဆင်းရသေးသည်။ “အဖေ့ကို အရက်သွားဝယ်ပေးဦး” “အို မလုပ်ပါနဲ့ အဖေက အသက်ကြီးနေပြီလေနော် မသောက်နဲ့နော်” “ငါက သွားဝယ်ဆို သွားဝယ်ပေါ့” “အို အဖေက အသက်ကြီးနေပြီ” “နင်က ငါ့ကို အသက်ကြီးနေပြီထင်တယ်ပေါ့” ဆိုကာ ယောက္ခမကြီးက မိုးစုကို ဖက်လေသည်။
မိုးစုက ရုန်းသည်။ “မလုပ်ပါနဲ့ သူများမြင်ရင် မကောင်းဘူး” “သူများ မမြင်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့” “မဟုတ် မဟုတ်ပါဘူး” “သူများမမြင်အောင် ငါအသက်မကြီးကြောင်း ပြရသေးတာပေါ့” ပြောလည်းပြော ယောက္ခမကြီးက မိုးစုကို ဖက်၍ ကြမ်းပြင်ပေါ် အိပ်ချသည်။ မိုးစုက ရုန်းသော်လည်း မနိုင်။ မိုးစုနို့ကို အတင်းကိုင်သည်။ “မလုပ်ပါနဲ့ရှင် မကောင်းပါဘူး” “အခု မကောင်းသေးပေမယ့် ခဏနေကောင်းစေရမယ်” မိုးစုမှာ ယောက္ခမကို ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်လည်း မနိုင်။ စကားအားဖြင့်လည်း မနိုင်ဖြစ်နေသည်။ ယောက္ခမက ပြောလည်းပြော အင်္ကျီကိုလည်း ပင့်သည်။ “နင် ငါ့သားနဲ့ မရခင် လိုးကြသေးလား” “အို” ယောက္ခမ အမေးကြောင့် မိုးစုတော်တော်ရှက်သွားသည်။ “ကြည့်ရတာ နင်ကောင်းကောင်း အလိုးမခံဖူးသေးဘူးနဲ့တူတယ်” ပြောလည်းပြော ယောက္ခမကြီးက သူမနို့ကို အတင်းစို့လေသည်။ နို့ကို တလုံးပြီး တလုံးစို့သည်။ ထို့နောက် သူမကို အတင်းတွန်းကာ မှောက်ခိုင်းသည်။ သူမ မှောက်သွားတော့ ထမိန်ကို အတင်းချွတ်သည်။ ထမိန်ကျွတ်တော့ ဆပ်စမိန်နာကို ချွတ်သည်။ ထို့နောက် ဖင်လုံးကြားကနေ စောက်ဖုတ်ကို လျက်သည်။ မိုးစုမှာ အော်လည်းမအော်ရဲ။ ကြောက်လည်းကြောက် ဖြစ်နေသည်။
နောက်ကနေ အဖုတ်ကို လျက်ပြီးနောက် သူမကို ပက်လက်ဆွဲလှန်သည်။ သူမပက်လက်လှန်တော့ အဖုတ်ကို လျက်သည်။ “ဟင့် ဟင့် ဟင့် မလုပ်ပါနဲ့ ရှင် အင့် အဟင့် အဟင့်” မိုးစုငိုသည်။ သို့သော်လည်း ယောက္ခမကြီးက အဖုတ်ကို ဆက်တိုက်လျက်သည်။ ထို့နောက် အပေါ်တက်လာကာ နွုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ သူမ ပြန်မစုပ်။ ယောက္ခမက အောက်ဆင်း၍ နို့ကိုနမ်းစို့သည်။ သူမ မရုန်းနိုင်။ ခဏနေ ယောက္ခမက အနီးတွင်ရှိသည့် သူနားနေကျ နေရာမှ ခေါင်းအုံးကို ဆွဲလာသည်။ သူမ ဖင်အောက် ခုသည်။ ထို့နောက် သူမပေါင်ကို ဆွဲကားသည်။ ပြီးလျင် သူမအဖုတ်ကို လျက်သည်။ မိုးစုက ယောက္ခမခေါင်းကို တွန်းထုတ်ချင်သည်။ သို့သော်လည်း လူကြီးခေါင်းကို မကိုင်ရဲ။ သူမပေါင်ကို ဖိကာ ဆွဲကား၍ သူမစောက်ဖုတ်ကို အတင်းလျက်သည်။ မိုးစုမှာ နို့ကိုသာ အုပ်ထားမိသည်။ ခဏကြာတော့ ယောက္ခမက သူမကို ဆွဲထူသည်။ “ဘာမှ မတွေးနဲ့ မေ့လိုက်တော့ နင့်ကို ငါကောင်းကောင်းချစ်ပေးမယ်” ဆိုကာ နွုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းသည်။ ပြီးလျင် ယောက္ခမက သူ့အဝတ်အစားကို ချွတ်နေသည်။ သူမ ထွက်ပြေးချင်သည်။ သို့သော်မရ။
ယောက္ခမက သူမကို ဖက်၍ ရင်ခွင်ထဲထည့်ကာ အဖုတ်ကိုနှိုက်သည်။ သူမကိုလည်း စုပ်နမ်းသည်။ ခဏနေ သူမလက်ကို ယူ၍ လီးကိုကိုင်ခိုင်းသည်။ မိုးစု တစ်ခါမှ လီးမကိုင်ဖူးပါ။ ရွံသည်။ သူမလက်ကို အတင်းရုတ်သည်။ လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားသည်။ “နင် လီးတောင် မကိုင်ဖူးသေးဘူးပေါ့” ယောက္ခမက အထာနှပ်သည်။ မိုးစု ခေါင်းငုံ့သည်။ “ဒါဆို ဘယ်စုပ်ဖူးဦးမလဲနော်” ယောက္ခမက မတ်တပ်ထကာ သူမခေါင်းကိုကိုင်သည်။ လီးကြီးက တန်းမတ်နေသည်။ နည်းနည်းပင် ကော့နေသည်။ သူမက ခေါင်းငုံ့သည်။ ယောက္ခမက ပေါင်တဖက်ရှေ့တိုး၍ သူမခေါင်းကို ပေါင်တွင် ဆွဲကပ်ပြီး လီးကို သူမပါးစပ်ထဲ ထည့်သည်။ သူမခေါင်းခါသည်။ မရ။ ယောက္ခမလီးက အကြီးကြီးဖြစ်သည်။ သူမပါးစပ်ထဲ အတင်းထိုးထည့်သည်။ သူမ ငိုရင်း ငုံရသည်။ ယောက္ခမက လီးကိုကိုင်၍ ပါးစပ်ကို လိုးသည်။ သူမ ထွေးထုတ်သည်။ လီးခေါင်းကို ယောက္ခမအတင်းပြန်ထည့်သည်။ သူမက တွန်းထုတ်သည်။ မရ။ ယောက္ခမက ခေါင်းကိုတဖက်ကိုင်ကာ လီးကိုတဖက်ကိုင်ပြီး သူမပါးစပ်ထဲ အတင်းထည့်သည်။ သူမငုံရသည်။ ခဏကြာတော့ သူမနောက်စေ့ကို ကိုင်ကာ လီးကိုထိုးထည့်သည်။ လီးကိုမကိုင်တော့။ ပါးစပ်ကို လိုးသည်။ အတင်းထိုးထည့်သည်။
သူမ ခေါင်းလွဲရသည်။ လီးကျွတ်သွားသည်။ သူမကို တွန်းလှဲ၍ ယောက္ခမက သူမပေါင်ကို ဆွဲကားကာ လိုးသည်။ “မ မလုပ် မ အ အ အ” မိုးစု အော်ပင် မအော်နိုင်။ လီးကြီးက သူမအဖုတ်ထဲ ဇွတ်ဆို ဝင်သွားသည်။ သူမ ငိုရင်းအလိုးခံရသည်။ ယောက္ခမက သူမကို ကြည့်ရင်းဆောင့်သည်။ တော်ကြာတော့ သူမကို ကိုင်း၍ဖက်ကာ သူမပါးကို နမ်းရင်း လိုးသည်။ သူမခေါင်းခါသည်။ ယောက္ခမက ပြန်မတ်၍ သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထောင်ကာ လိုးသည်။ “ဖတ် ဖတ် ဖတ်” သူမ ဖင်ကို ဆောင့်မိသည့်အသံက ဆူညံနေသည်။ တော်တော်ကြာအောင် ဆောင့်လိုးသည်။ “ကုန်းတတ်လား” သူမကို မေးသည်။ သူမ မပြောရသေးခင် သူမကို ဆွဲထူကာ ကုန်းခိုင်းသည်။ သူမလည်း ကြားဖူးနားဝသာ ရှိသည့် လေးဖက်ထောက်ကုန်းနည်းဖြင့် ခံပေးသည်။ ယောက္ခမကြီးက တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဆောင့်လိုးသည်။ ဖင်တုန်းတွေ တုန်နေသည်။ နောက်တမျိုးအနေဖြင့် သူမကို လက်မထောက်ခိုင်းတော့ဘဲ မှောက်အိပ်လျက် ဖင်ထောင်ကာ လိုးသည်။ ဆောင့်တာမှ တချက်စီဆောင့်သည်။ သူမပင် ရှေ့ထွက်ထွက်သွားသည်။ နောက်ကနေ ဆောင့်လို့အားရပြီးသည့်နောက် သူမကို ပက်လက်ထပ်လိုးပြန်သည်။ “ဘယ်လိုလဲ ငါအသက်ကြီးပြီလား” သူမ ခေါင်းခါသည်။
“ကောင်းသွားပြီမဟုတ်လား” သူမ ခေါင်းထပ်ခါသည်။ “မကောင်းသေးဘူးလား၊ ကောင်းအောင် ဆက်လိုးရမှာပေါ့” ဆိုကာ သူမနွုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းသည်။ အောက်ကလည်း ဆောင့်လိုးသည်။ သူမနို့ကို ဆက်စုပ်သည်။ အောက်က တောက်လျောက်လိုးသည်။ နောက် သူမတံကောက်ကနေ သူမပေါင်ကို ကားနေအောင် ဆွဲ၍ လိုးသည်။ နို့ကိုလည်း ကိုင်သည်။ တော်တော်ကြာသည်။ ခဏနေ သူမကို ခွ၍ သူမပါးပေါ် လီးရည် လာလွတ်ချသည်။ လီးရည်ရော မျက်ရည်ပါ သူမပါးပြင်တွေ စိုနေတော့သည်။ ချွေးတွေလည်း ပါသည်။ သူမ မဲ့နေမိသည်။ လီးရည်ကို သုတ်သည်။ ယောက္ခမကြီးက သူမဘေးနားတွင် အတူအိပ်နေသည်။ အမောပြေသွားတော့ ထသွားသည်။ သူမက ရှက်ရှက်နှင့်ထ၍ ရေချိုးသည်။ ပြန်ထွက်လာတော့ သူ့စာ သူဖတ်နေသည်။ ပုံစံက ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလို။ ညကျတော့ ယောကျားက တခါဘွတ်သဖြင့် သူမမှာ ငိုချင်ချင်ဖြစ်သွားသည်။ နေ့ခင်းက သူ့အဖေ ဘွတ်ခဲ့သည့် အဖုတ်ဆိုတာ သူသိမှ သိပါလေစဟုတွေးမိသည်။ နောက်နေ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ အလုပ်သွားတော့ သူမကြောက်နေသည်။ “ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပြန်ဘူး” သူမက ဧည့်ခန်းဆိုဖာပေါ် ထိုင်နေချိန် ယောက္ခမက ဘေးနားလာထိုင်ရင်း ပြောသည်။ “ငါ့ကို မလွမ်းဘူးလား” မိုးစု ခေါင်းသာ ငုံ့နေရသည်။
ယောက္ခမက သူမလက်ကို ကိုင်သည်။ နမ်းသည်။ သူမက ကျောက်ရုပ်လို နေနေသည်။ ထိုအခါ မနေနိုင်တော့သော ယောက္ခမက သူမကို ဖက်သည်။ သူမက အလဲပြိုလိုက် ယောက္ခမရင်ခွင်ထဲ ကျောက်အမီလိုက် ရောက်သွားသည်။ ယောက္ခမက ဖက်ထားရင်း နို့ကိုကိုင်သည်။ နားရွက်ကို စုပ်နမ်းသည်။ နောက် ပါးပြင်ကို နမ်းသည်။ ပြီးလျင် နွုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ နောက်နို့ကို ကိုင်သည်။ နမ်းလို့ပြီးတော့ သူမကို သီးသန့်ထိုင်ခိုင်းပြီး သူမအင်္ကျီများကို ချွတ်သည်။ သူမ မငြင်းရဲပါ။ ယောက္ခမကြီးက သူမနို့ကို ကိုင်၍ နို့သီးခေါင်းကို စို့သည်။ သူမက နို့ကို လက်နဲ့အုပ်တော့ သူမလက်ကို ဖယ်သည်။ နို့တွေကို တလုံးကိုင်၍ တလုံးစို့သည်။ နို့သီးခေါင်းချည်း သီးသန့်စို့သည်။ နို့စို့၍ ဝသော် နွုတ်ခမ်းကို နမ်းသည်။ ထို့နောက် ဆိုဖာအောက်ဆင်းကာ သူမထမိန်ကို ဆက်ချွတ်သည်။ သူမဆပ်စမိန်နာ ကျန်သေးသည်။ ယောက္ခမက ဆပ်စမိန်နာ အပေါ်ကနေ သူမအဖုတ်ကို နမ်းစုပ်သည်။ သူမပေါင်ချင်းစေ့လိုက်တော့ ယောက္ခမက သူမခြေမကို နမ်းစုပ်သည်။ ခြေဖဝါးကို လျက်သည်။ ခြေသလုံးကို လျက်သည်။ ထို့နောက် သူမကို တစောင်းဆွဲလှည့်၍ သူမအိုးကို နမ်းသည်။ စုပ်သည်။ ဖင့်ညောင့်ရိုးကို လျက်သည်။ ထပ်၍ ဖင်ကိုလျက်သည်။
ဆပ်စမိန်နာကို ချွတ်သည်။ သူမကို ဆိုဖာပေါ် လေးဖက်ထောက် ကုန်းခိုင်းသည်။ ယောက္ခမက ဖင်ကိုတောက်လျောက် လျက်သည်။ မိုးစုခမျာ အဖုတ်တွေ ယားလာသည်။ ထို့ကြောင့် အဖုတ်ကို လှမ်းနှိုက်ရသည်။ အကုန်းလိုက် ဖက်အလျက်ခံရင်းမိုးစုတယောက် ကိုယ့်အဖုတ်ကို ပထမဦးဆုံး ပြန်နှိုက်ဖူးသည်။ မင်္ဂလာဦးညက ယောက်ျားက အဖုတ်ကို နှိုက်တော့ မနှိုက်ခိုင်းပဲ “ဒီတိုင်းပဲ လုပ်နော်” ဟုပြောကာ လိုးခိုင်းရသည်။ မင်္ဂလာဦးညက တဖက်ခန်းတွင် ယောက္ခမရှိနေ၍သာ သူမ မအော်ခြင်းဖြစ်သည်။ တော်တော်နာခဲ့သည်။ ထိုမျ နာစဉ်ကပင် သူမ ကိုယ့်အဖုတ်ကိုယ်ပြန်မကိုင်ခဲ့။ ခုတော့ ပြန်ကိုင်ရပြီ။ ယောက္ခမက ဖင်ကို လျှာနဲ့မွေသေးသည်။ ယောက္ခမက သူမကို ဆွဲလှည့်သည်။ ထို့နောက် ပေါင်ကို ဆွဲကားသည်။ ပြီးလျင် အဖုတ်ကို သေချာကြည့်သည်။ မိုးစုရှက်သည်။ အဖုတ်ကို လက်နဲ့ အုပ်မိသည်။ ယောက္ခမက ဖယ်၍ အဖုတ်ကိုလျက်သည်။ ဖင်ကိုလည်း တွဲလျက်သည်။ ယောက္ခမက သူမကို ဆိုဖာပေါ် အကျအနထိုင်ခိုင်းသည်။ ကားခိုင်းသည်။ ပြီးလျင် သူမစောက်ဖုတ်ထဲကို လက်ခလယ်ဖြင့် ထိုးမွေသည်။ ယောက္ခမက ရိုးရိုးမမွေဘဲ လက်ခလယ်ကို တံတွေးဆွတ်ဆွတ်၍ မွေသည်။ မွေလို့ဝသော် လျက်သည်။
စုပ်လျင်လည်း မနားတမ်းစုပ်သည်။ မိုးစုတယောက် အကြောတွေ တောင့်တင်းနေသည်။ ပါးစပ်ကို လက်ဖြင့်ပိတ်ကာ အော်ရသည်။ အဖုတ်ကို မနားတမ်းစုပ်ပြီး ချက်ကို စုပ်သည်။ နောက် နို့ကိုစုပ်သည်။ ပြီးတော့ နွုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ မိုးစုတယောက် စောက်ရည်တဗြန်းဗြန်းထွက်သည်။ သူမခွေကျသွားတော့ ယောက္ခမက လီးကိုင်ခိုင်းသည်။ သူမ မောနေသည်. လီးကို ခုထိ ကိုင်ဖို့ ကြောက်နေသေးသည်။ ယောက္ခမက အကုန်ချွတ်ကာ မနေ့ကလိုပင် သူမခေါင်းကိုကိုင်၍ လီးကို ပါးစပ်ထဲ အတင်းထည့်သည်။ သူမ သိပ်တော့ မကြောက်ပေမယ့် ရှက်သည်။ သို့သော်လည်း မရ။ ယောက္ခမက ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖိထားပြီး လီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ လိုးသည်။ သူမလည်း ငြိမ်၍ ပါးစပ်ကို အလိုးခံရသည်။ အတင်းထိုးထည့်လာသဖြင့် သူမက ယောက္ခမပေါင်ကို တွန်းထားရသည်။ သို့သော်လည်း ယောက္ခက လီးကိုတော့ ပါးစပ်ထဲကနေ မထွက်အောင် ခေါင်းကိုအတင်းချုပ်ကာ လိုးသည်။ သူမ အာခေါင် စိုက်လုလု ဖြစ်ရသည်။ နောက် သူမကို ဆွဲထူ၍ နွုတ်ခမ်းကို နမ်းစုပ်သည်။ သူမမောနေသည်။
“ဖင်လိုးမယ် ကုန်းပေး” “ဟင် အင်” မိုးစုကြောင်သွားသည်။ ဒါကြောင့် ယောက္ခမကြီးက ဖင်နင်းကန်လျက်နေသည်ကိုး။ “နင့်အဖုတ်က ခုမှ ပြီးထားတော့ နာနေတယ်” မိုးစု ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။ စိတ်ကလည်း လာနေပြီမို့ ဘာပဲလိုးလိုးဆိုသည့် စိတ်က ပေါက်နေသည်။ အရပ်လိုက် ဆိုဖာကို လက်ထောက်ကုန်းပေးသည်။ ယောက္ခမက အိုးကိုဖြဲ၍ ဖင်ထဲ လီးထည့်သည်။ မင်္ဂလာဦးညက စောက်ဖုတ် အလိုးခံရသည်ထက် နာသော်လည်း ကောင်းနေသည်။ နာတာကို ကြိုက်သည်။ နာလေလေ ကောင်းလေလေဟု ထင်သည်။ ယောက္ခမက ဖင်ထဲကို လီးကြီးသိပ်ထည့်ပြီး ဆောင့်သည်။ လီးတော်တော်ဝင်ပြီး အဆင်ပြေပြေ ဆောင့်လို့ရသည့်အခါ သူမလက်တဖက်ကို ဆွဲ၍ လိုးသည်။ လိုးရင်း ပိုအဆင်ပြေတော့ သူမကို လက်မထောက်ခိုင်းတော့ပဲ အရပ်လိုက်လိုးသည်။ အရပ်လိုက် လိုးပြီးနောက် သူမကို ဆိုဖာပေါ် ပြန်အိတ်ခိုင်းသည်။ ပြီးလျင် ဖင်ကို လျက်သည်။ ထို့နောက် ပက်လက်အိပ်နေသော သူမကို ဖင်ထောင်အောင် ထားလျက် ဖင်ကို လိုးသည်။ မိုးစုမှာ ဖင်ကို ပထမဦးဆုံးခံရသဖြင့် နာနေသော်လည်း ကောင်းနေသည်။ ယောက္ခမက ဖင်လိုးရင်း နမ်းသည်။ ယောက္ခမသည် သူမကို ဖင်လိုးရင်း ဆိုဖာပေါ်တွင်ပင် တစောင်းလှည့်သည်။ တစောင်းလိုက် ဆက်လိုးသည်။
လိုးရင်း တဖန် သူမကို အပေါ်ဆွဲထူသည်။ ယောက္ခက အောက်က ထိုင်သည်။ သူမက အပေါ်က ကား၍ ဖင်ဖြင့် ယောက္ခမလီးပေါ် ဆောင့်ချသည်။ ယောက္ခမက သူမခါးကိုကိုင်၍ ဆောင့်ချခိုင်းပြီးနောက် သူမပေါင်ကို အတွင်းဘက်စုသည်။ ထို့နောက် ဖင်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲခိုင်းသည်။ ပြီးလျင် ယောက္ခမက နို့ကိုကိုင်သည်။ “အဖုတ် ဆာရောပေါ့” ယောက္ခမက အဖုတ်ကို ထပ်လိုးသည်။ သူမကို ဆိုဖာပေါ် ပက်လက်ထားသည်။ ပေါင်ကြားထဲ ဝင်ကာ ပေါင်ကို ဆွဲထောင်၍ အဖုတ်ကို လိုးသည်။ သူမလက်နှစ်ဖက်ကို လှမ်းကိုင်၍ အကုန်းလိုက်နေလိုးသည်။ သူမမှာ နာလွန်းသဖြင့် ခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။ သို့သော်လည်း ယောက္ခမကြီးက နို့ကို ကုန်းစို့ပြန်သည်။ ပြီးလျှင် မတ်တပ်ထိုင်ကာ သူမဒူးကနေ ကိုင်၍ ကားကာ သူမ အဖုတ်ကို ဆောင့်လိုးသည်။ လိုးရင်း သူမပခုံးကို ဖိကိုင်၍ နို့ကို စို့ပြန်သည်။ နို့စို့ပြီးတော့ သူမနွုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ ပါးကိုနမ်းသည်။ ဆက်လိုးသည်။ သူမပေါင်ကို ထောင်၍ လိုးသည်။ ပေါင်ကို စု၍ ဆက်လိုးသည်။ နို့ကိုလည်း ကိုင်သည်။ ဆောင့်ချက်တွေ မြန်လာသည်။ ထို့နောက် သူမမျက်နှာကိုခွ၍ သူမနွုတ်ခမ်းဘေးတွင် လရည်ကို ကွင်းတိုက်ချသည်။ မိုးစုမှာ နာလွန်းသဖြင့် ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင် အသက်ကို လုရွူနေရသည်။
လရည်အနံ့က နှာခေါင်းတွင်းသင်းပျံ့စွာ ကျန်ရစ်သည်။ သူမ အတော်ကြာကြကာ နားပြီးမှ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ နေ့လည် ၁ နာရီလည်းထိုးနေပြီဖြစ်သည်။ ယောက္ခမကြီး သူမကို လိုးတာ ခြောက်နာရီနီးပါးရှိသည်။ နောက်နေ့တွင်တော့ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ယောက်ျားဖြစ်သူက အလုပ်နားသည်။ သူမက အဘိုးကြီးကို ညုတုတုပြုံးပြဖြစ်သည်။ အဖိုးကြီးက ယောက်ျားကွယ်ရာတွင် ကွင်းတိုက်ဟန်လုပ်ပြသည်။ ခဏနေ ယောက်ျားအလုပ်က ဖုန်းဝင်လာသည်။ ယောက်ျားက အပြင်တွင် ဖုန်းပြောသည်။ အဖိုးကြီးက သူမနားတမ်းကပ်သည်။ “နင့်အဖုတ် ယားနေပြီမလား” ဆိုကာ ယောက္ခမကြီးသည် သူမပေါင်ကြားကိုနှိုက်သည်။ “မလုပ်နဲ့ ဒီနေ့ နားချင်တယ်” “ငါမှ မနားချင်တာ” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” “ရတယ် နင့်ကို ငါမလိုးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါပြီးအောင်တော့ လုပ်ပေး” “ဟအင်း ဟင့်အင်း” ယောက္ခမကြီးက သူမ ငြင်းနေသော်လည်း ဘောင်းဘီခါးပတ်ကို ဖြုတ်သည်။ ဇစ်ကိုဖွင့်သည်။ သူမလက်ကို ဆွဲ၍ အတွင်းခံကို ကိုင်ခိုင်းသည်။ သူမ ရုန်းသော်လည်း သူမလက်ကောက်ဝတ်ကို တင်းတင်းဆုပ်ထားသည်။ သူမမကြည့်တော့ သူမ မျက်နှာကို ဆွဲလှည့်၍ ကြည့်ခိုင်းသည်။ သူမနွုတ်ခမ်းကို ကိုင်သည်။ ထို့နောက် လီးထုတ်၍ သူမကို ကိုင်ခိုင်းသည်။
သူမက မကြည့်ဘဲ လက်တဖက်ဖြင့် ကွင်းတိုက်ပေးသည်။ “ဒီနေ့ စောက်ပတ်နားတဲ့နေ့လား” “ဒီနေ့ မလုပ်ပါနဲ့” “ဖင်ကော နားလား” “အို” “ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါကတော့ တခုခုထဲသွင်းပြီးမှ ပြီးမှာ” ကွင်းတိုက်နေရင်း ယောက္ခမကြီးက စကားတွေ ဇွတ်ပြောနေသည်။ သူမက ခေါင်းသာ ခါသည်။ ယောက္ခမကြီးက သူမလည်ပင်းကို ဖက်၍ ထရပ်သည်။ ထို့နောက် လီးကိုထုတ်ပေးသည်။ “ပါးစပ်နဲ့ ပြီးအောင် လုပ်ပေး” သူမ ခေါင်းခါသော်လည်း ယောက္ခမကြီးက သူမခေါင်းကိုကိုင်၍ သူ့လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်သည်။ မိုးစု မငြင်းနိုင်။ သူမ စုပ်ပေးရသည်။ အာခေါင်ထဲထိုးထည့်သဖြင့် သူမနောက်ဆုပ်သည်။ လီးက ကျွတ်သွားသည်။ ယောက္ခမက လီးကိုပင့်ကိုင်၍ သူမနွုတ်ခမ်းတွင် လီးကို ပွတ်သည်။ လီးတံကြီးဖြင့် သူမနွုတ်ခမ်းကို ပွတ်သည်။ ပါးပြင်ကို လီးနဲ့ထိုးသည်။ လီးတံအောက်ပိုင်းကို လျက်ခိုင်းသည်။ သူမငြင်းတော့ သူမပါးစပ်ထဲ ပြန်ထည့်သည်။ သူမခေါင်းကိုတဖက် လည်ပင်းကိုတဖက်ဖက်ကာ သူမပါးစပ်ကို လိုးသည်။ သူမမှာ တံတွေးပင် မမြိုချနိုင်လောက်အောင် ပါးစပ်ကို အလိုးခံရသည်။ လီးကို ပါးစောင်တွေထိုး၍ လိုးသည်။ သူမ တံတွေးတွေ စီးကျနေသည်။ သူမမော၍ နောက်ဆုတ်သည့်အခါတိုင်း တံတွေးတွေ တပြုံကြီးကျသည်။
သို့သော်လည်း ယောက္ခမကြီးကတော့ဖြင့် ပြန်လိုးသ်။ သူမပါးစပ်ကို အဖုတ်လိုးသလို ဆောင့်လိုးသည်။ အာခေါင်ကို လိုးပြီးလျင် ဘယ်ပါးစောင် ညာပါးစောင်လိုးသည်။ နောက် အာခေါင်ကို ပြန်လိုးသည်။ ခေါင်းကို ချိုစောင်းလောက်ကနေ ကိုင်ထားသည်။ လီးကို ထပ်မထိုတော့။ မိုးစုတယောက် အသက်ကို ကြိုးစားရွူရသည်။ လိုးရင်း မြန်လာသည်။ နောက် သူမပါးပြင်ပေါ် ကွင်းတိုက်ချသည်။ ခဏအကြာ ယောက်ျားပြန်ဝင်လာ၍ သူမ မီးဖိုချောင်ပြေးဝင်ရသည်။ မျက်နှာတွေ တန်းသစ်ရသည်။ ဟန်တော်တော်ဆောင်လိုက်ရသည်။ “မိန်းမ” “ရှင် ယောက်ျား” “ယောက်ျား ခရီးတစ်ပတ်လောက် ထွက်ရဦးမယ်၊ အဲဒါ ခရီးဆောင်အိတ် ပြင်ပေးပါဦး” “ဟုတ် ယောက်ျား” “ဖေဖေကော” “သိဘူးလေ” သူမလိုက်ရှာတော့ ယောက္ခမကြီးကို မတွေ့။ သူ့ဘော်ဒါတွေနဲ့ သွားတွေ့တာထင်တာ။ ဖုန်းပြောသည့် ၁၅ မိနစ်တာတွင် သူ့မိန်းမ ပါးစပ်အလိုးခံလိုက်ရသည်ကို မသိသော ယောက်ျားကို ကြည့်ရင်း မနက်ဖန် ခရီးသွားမည်ဆိုတော့ တမျိုးကြီး ခံစားရသည်။ သူ့အဖေအကြောင်း သူမသိဘူးတဲ့လားဟု စိတ်လည်း ညစ်သည်။ တွေးမနေတော့ဘဲ ယောက်ျားခရီးသွားဖို့ ပစ္စည်းတွေ ပြင်ပေးသည်။ ညနေစောင်းတော့ ယောက္ခမက အိတ်တစ်လုံးနဲ့ ပြန်လာသည်။
အိတ်ကို ကုတင်အောက် ပစ်ထည့်သည်။ “မိန်းမ” “ဟင် ယောက်ျား” “နက်ဖန် ခရီးသွားရဦးမှာဆိုတော့ ဒီည ယောက်ျားကို သုံးချီလောက်ပေးနော်” သူမ တိတ်ဆိတ်စွာ ခေါင်းညိတ်သည်။ ယောက်ျားက ညဦးပိုင်းတွင် နှစ်ချီလိုးသည်။ ယောက်ျားက သူ့အဖေလို မဟုတ်။ ထမိန်လှန်ပြီး တက်ခွကာ လိုးသည်။ သူမ ပြီးပြီး မပြီးပြီး သူပြီးလျင် နားသည်။ မနက်လင်းအားကြီးတော့ တချီထပ်လိုးသည်။ ထို့နောက် ခပ်စောစောပင် ခရီးထွက်သွားသည်။ သူမလည်း မနက်လုပ်နေကျ မျက်နှာသစ် ထမင်းချက်စသည့် အလုပ်ကို လုပ်နေသည်။ ယောက္ခမကြီးကို မနက်စာခေါ်စားသည်။ ယောက္ခမက ကြက်ဥကို ဟတ်ဘရိုက် ဆယ်လုံးကျော်ခိုင်းသည်။ သူမကလည်း သိသည်။ သို့သော် မတတ်နိုင်ပါ။ သူငါးလုံးစား၍ သူမကို ငါးလုံးစားခိုင်းသည်။ ထမင်းစားနေချိန် ဘာမှလည်း မပြော။ သူမကိုလည်း မထိ။ ထမင်းစားပြီးတော့ သူမသိမ်းကြုံးဆေးတော့လည်း ဘာမှမပြော။ ခဏနေ ဖုန်းပြောသံကြားရသည်။ “ငါ့သား အခုဘယ်ရောက်နေပြီလဲ” “အဖေ ကျနော်လေယာဉ်စီးတော့မှာ အဖေ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါဦး၊ ကျနော့်မိန်းမကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပေးပါဦး” “ခုတော့ အဖေ့ကိုကျော်ပြီး မိန်းမကို သတိရပြီပေါ့”။
“မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ အဖေ့ကို ချစ်ပါတယ်၊ ဒါပဲနော် အဖေ လေယာဉ်ထွက်တော့မှာမို့” “အေးအေး” ဟုဆိုကာ ဖုန်းချသွားသည်။ ယောက္ခမကြီးသည် သူမကိုလက်မောင်းကနေ လာဆွဲ၍ သူ့အခန်းထဲခေါ်သည်။ “ဘာလုပ်မလို့လဲ အဖေ” “အဲလိုကြီးမခေါ်ပါနဲ့ကွာ မင်းနဲ့ငါက သူစိမ်းတွေမှ မဟုတ်တာ” မိုးစုလက်အုပ်လေးချီပြီး အဖိုးကြီးရင်ခွင်ထဲကနေ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ တောင်းပန်ကြည့်သည်။ “ကျမတို့ မဟုတ်တာတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့စို့ရှင်” “မဟုတ်တာတွေ မလုပ်ပါဘူး၊ ဟုတ်တာတွေပဲ လုပ်မှာပါ၊ အေး မဟုတ်တာလည်း နည်းနည်းပါမယ်ထင်တယ်” ယောက္ခမကြီးက ပြော၍ရမည်မထင်။ သားမရှိတော့ ထင်တိုင်းကြဲတော့မည့်ပုံ။ သူမ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့သာ မော့ကြည့်နေမိသည်။ “ကုတင်အောက်က အိတ်ကို ယူပေးပါဦး” သူမ မထချင် ထချင်ဖြင့် ကုတင်အောက်က ဂျင်းကြောပိုးအိတ်လေးကို ယူပေးလိုက်သည်။ အဖိုးကြီးက အိတ်ကို ဖွင့်သည်။ အထဲတွင် ပလပ်စတစ်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော ပစ္စည်းများကို တခုချင်းစီထုတ်၍ သူမကို ပြသည်။ ပစ္စည်းများက သူမအတွက်စိမ်းနေသော်လည်း ဒါလိင်နဲ့ပတ်သက်သည့်ပစ္စည်းဆိုတာ သိသည်။ ယောက္ခမကြီးက ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်သည်။ ပစ္စည်းက အပြာရောင်လေ။
ကင်းမုံသီးလောက် အရွယ်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ကြိုးတန်းလန်းနဲ့။ ပြီးနောက် တဖက်တွင် ရောင်စုံမီးခလုတ်လိုမျိုး ခလုတ်က ပါသည်။ ယောက္ခမက ထိုပစ္စည်းကိုဖြေ၍ သူမနို့ကို ဖွင့်သည်။ ဖွင့်သည်ဆိုတာက အပေါ်အင်္ကျီကိုလည်းမချွတ် ဘော်လီကိုလည်းမချွတ်ဘဲ အပေါ်ကနေ ဆွဲ၍ နို့ပေါ်အောင် လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထမိန်ကိုလည်း ပင့်သည်။ သူမက မနေ့ညကတည်းက သည်အဘိုးကြီး သူမကို မနားတမ်းလိုးတော့မည်ဟု သိသော်လည်း ခုလိုတော့ ထင်မထား။ သူမကို နောက်ကနေဖက်၍ ပေါင်ကြားကို ကိုင်သည်။ သူမက ရှက်သည်။ ယောက်ျားမရှိတော့ ယောက္ခမကြီးက ကိုယ့်ကို မိန်းမပျက်တယောက်လို ဆက်ဆံသည်။ ကင်းမုံသီးဘုလေးကို သူမနို့သီးပေါ်တည့်တည့်တေ့သည်။ ခလုတ်ကို နှိုက်သည်။ ကင်းမုံသီးက တုန်ခုန်နေသည်။ နို့ကို လျှာနဲ့ လျက်သည်ထက် ဆိုးသည်။ တုန်ခါနေသောဘုက နို့သီးခေါင်းကနေတဆင့် သူမအကြောတွေကို ဖွင့်ပေးသည်။ သူမ မငြိမ်နိုင်တော့။ ယောက္ခမက ဘုဖြင့်ဖိသည်။ နို့သီးခေါင်းတလုံးပြီး တလုံးပြောင်းသည်။ သူမခြေထောက်တွေ ကန်သည်။ ခြေချင်းဝတ်များလည်ထွက်နေသည်။ အသက်ရွူတွေ မှားလောက်သည်။ ယောက္ခမက သူမပေါင်ကြားထဲကို ထိုဘုထည့်၍ ဆပ်စမိန်နာဖြင့် ပြန်ဖုံးသည်။
သူမက ကြိုးစကနေ ဆွဲ၍ ထုတ်သည်။ ထိုအခါ သူမကို ကုန်းခိုင်းသည်။ သူမလည်း သည်လူကြီး လုပ်သမျ ခံရတော့မည် သိသဖြင့် မငြင်းတော့ဘဲ လေးဖက်ထောက်ကုန်းသည်။ ဘုလုံးကို နောက်ကနေ ကစားသည်။ ထို့နောက် စောက်ခေါင်းထဲထည့်သည်။ ပြီးတော့ ခလုတ်နှိုက်သည်။ ကင်းမုံသီးဘုလေးက စောက်ခေါင်းထဲတွင် တဒီဒီဖြင့် တုန်ခါနေသည်။ ဖြစ်နိုင်လျင် သူမ ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြား အော်ပစ်ချင်သည်။ ခက်သည်က အိမ်တွေက ကပ်နေသည်။ ယောက္ခမက ဘုလုံးကို ကုန်းပေးထားသော သူမစောက်ဖုတ်ကို နောက်ကနေ ထည့်ထားပြီး ခလုတ်ဖွင့်ကာ သူမအိုးကို ပွတ်သပ်သည်။ သူမမှာ တုန်ရီနေသည်။ အံကြိတ်ထားရသည်။ “လီးနဲ့ပဲလိုးပါ အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့” “ရွူး” သူမ တောင်းပန်သော်လည်း အဘိုးကြီးက ရွူးဟုသာ ပြန်ပြောသည်။ သူမမှာ အံကြိတ်ခံရုံမှတပါး အခြားမရှိ။ ယောက္ခမကြီးက ခလုတ်လေးနှိုက်ရင်း သူမမျက်နှာကို ကြည့်သေးသည်။ သူမ ဆံပင်ကို တဖက်သို့ သပ်တင်၍ ကြည့်သည်။ အဖုတ်ယားလွန်းသဖြင့် သူမ မခံနိုင်။ အိပ်ချသည်။ အိပ်ချတော့ ယောက္ခမကြီးက ဆပ်စမိန်နာ အကုန်ချွတ်သည်။ ပက်လက်ဖြင့် ခုနဘုကို ပြန်ထည့်သည်။
သူမကိုလည်း ဖက်ထားသည်။ ဘုကို စောက်ပတ်ထဲ ထည့်ပြီး ခလုတ်နှိပ်ကာ သူမနွုတ်ခမ်းကို နမ်းသည်။ သူမလည်း ပြန်နမ်းရင်း ညည်းအော်သည်။ ယောက္ခမကြီးက ဘုကို ဆွဲထုတ်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ထဲက နောက် တမျိုးထုတ်သည်။ အဖြူရောင် လီးတုကြီး။ ဆီလီကွန်ဖြင့် လုပ်ထားသည်။ နောက်တွင် ခလုတ်ပါသည်။ လီးခေါင်းက ကြီး၍ နောက်တွင် အရစ်အရစ်များ ပါသည်။ ခလုတ်ဖွင့်ကာ သူမပါးစပ်ထဲ ထည့်သည်။ လီးတုဖြူဖြူကြီးက တုန်ခါ၍ သူမပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်သည်။ သူမ ငြင်းသည်။ ယောက္ခမက နောက်တမျိုး ထပ်ကြိုးစားသည်။ သူမ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးတုကို ထည့်သည်။ လီးတုက တုန်ခါနေသည်။ သူမက ပေါင်ကို စုလိုက်သည်။ မရ။ ယောက်ခမကြီးက ဖယ်၍ လီးတုကို လီးခေါင်းတခုလုံး မြုပ်အောင်ထည့်သည်။ လီးတုက တုန်ခါစနစ်က အလုပ်လုပ်နေသည့် ကြားထဲ ယောက္ခမကြီးက ဆွဲလိမ်သည်။ တဆတ်ဆတ်လိုးသလို ထိုးသည်။ မိုးစုမှာ ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ခါနေမိသည်။ သူမ ပေါင်ကို စုချင်သည်။ မရ။ ခဏတော့ ယောက္ခမကြီးက လီးတုကို ထုတ်သည်။ “ခုနလို ကုန်းပေး” သူမ ခေါင်းအုံးပေါ် လက်ထောက်၍ ခပ်မတ်မတ်လေး ကုန်းလိုက်သည်။ ယောက်ခမက နောက်ကနေပြီး လီးတုဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲ လီးခေါင်းလောက် မြုပ်အောင်ထိုးသည်။
ပြီးလျင် မွေသည်။ အားရလောက်သည့်အခါ ထုတ်ကြည့်သည်။ ပြန်ထည့်သည်။ မိုးစုတယောက် ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ခါနေရသည်။ လီးတုကို ဆွဲလိမ်နေတော့ ပိုဆိုးသည်။ နောက်ဆုံး သူမ အိပ်ချလိုက်သည်။ ယောက္ခမကြီးက မရပါ။ သူမကို လည်ပင်းကနေ ဖက်၍ ဆွဲထူကာ နမ်းသည်။ လျှာတွေထိုးထည့်သည်။ သူမ ပြန်နမ်းသည်။ မလွတ်တမ်း ပြန်နမ်းသည်။ လီးတုကြီးကို ကြောက်သည်။ သို့သော်လည်း မရပါ။ ယောက္ခမကြီးက ပက်လက်ထိုင်၍ ကားနေသော သူမပေါင်ကြားထဲ ပြန်ထည့်သည်။ ခုတကြိမ်တော့ တဝက်လောက်ထည့်ကာ ထိုးထည့်ကစားသည်။ လိုးသလို လုပ်သည်။ သူမကိုလည်း ကျောကနေ ဖက်ထားသည်။ သူမမျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်သည်။ လီးတုက တဖြည်းဖြည်း မြုပ်လာသည်။ တဒီဒီနဲ့လည်း လည်နေသည်။ အဆုံးထိ အဖုတ်ထဲ ဝင်သည်။ ထိုအခါ လီးတုအရင်းတွင်ပါသော အချွန်လေးက စောက်ခေါင်းဘဲလ်လေးကို ထိသည်။ ယောက္ခမက ဖိထားပြီး သူမကို နမ်းသည်။ သူမ နမ်းရင်း နာသဖြင့် တွန်းထုတ်တော့ ယောက္ခမကြီးက သူမကို နံရံတွင် အကားလိုက်နေ၍ မှီခိုင်းပြီး လီးတုကြီးဖြင့် အဖုတ်ကို ထိုး၍ လိုးပါတော့သည်။ သူမလည်း ပေါင်ကြားကို ကား၍ ခံပေးရပါတော့သည်။ သူမပေါင်ချင်းထပ်သော်လည်း လီးတုကို အပြင်မထုတ်တော့။
တောက်လျောက် ထိုးပါတော့သည်။ စောက်ရည်ထွက်သည်အထိ အရွုံးပေးခံရပါတော့သည်။ သူမ နွုန်းချိနေသော်လည်း အဝတ်အမြန်ကောက်ဝတ်၍ အပြင်သို့ ပြေးထွက်လာသည်။ “ဘယ်ပြေးမလဲ မိရွေခဲ” ဆိုကာ အပြင်လိုက်ထွက်လာသည်။ သူမကို နံရံတွင် ဆွဲကပ်၍ ပါးတွေ နားတွေကို နမ်းပါတော့သည်။ နမ်းရင်း လီးကို ကိုင်ခိုင်းသည်။ သူမလည်း ကိုင်ပေးရသည်။ လီးကိုင်နေသော သူမလည်ပင်းကို ဖက်၍ နွုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းသည်။ လီးကို ချွတ်သည်။ လီးကို ကွင်းတိုက်ခိုင်းသည်။ သူမ လက်ပြန်တိုက်ပေးသည်။ ထို့နောက် သူမကို ဆက်နမ်းသည်။ သူမအဖုတ်ကိုလည်း ဆက်နှိုက်သည်။ သူမက နာသဖြင့် ထိုင်ချသည်။ ယောက္ခမကြီးက သူ့လီးကို သူမပါးစပ်ထဲ အသင့်ထည့်သည်။ သူမလည်း ငုံပေးသည်။ ဘိုးတော်က ပါးစပ်ကို လိုးသည်။ “လျှာထုတ်ထား” ဆိုကာ ယောက္ခမကြီးက သူမို ခိုင်းသည်။ သူမလျှာထုတ်တော့ လီးကို လျှာပေါ်ပွတ်သည်။ သူမလည်း လျက်ပေးသည်။ ထို့နောက် ယောက္ခမက လီးကို ပင့်ထားသည်။ သူမ လပြွတ်ကို လျက်ပေးသည်။ သူမလျှာပေါ် လီးကို ပွတ်သည်။ ပြီးတော့ ပြန်ထည့်သည်။ သူမ ငုံပေးသည်။ ယောက်ခမကြီးက သူမပါးစပ်ကို အလွတ်တမ်းလိုးသည်။ လိုးရင်း ခဏကြာတော့ သူမအင်္ကျီကို ချွတ်သည်။
သူမတံတွေးများက သူမနို့ပေါ် စီးကျသည်။ သူမ ပါးစပ်ကို လိုးတိုင်း တံတွေးများ မမြိုချနိုင်သဖြင့် တံတွေးစီးနေကျနေကျဖြစ်သည်ကို ယောက္ခမကြီးက သိသည်။ ထို့ကြောင့် နို့ပေါ် စီးကျခိုင်းသည်။ ပြီးလျင် ပါးစပ်ကို အပြီးလိုးပါတော့သည်။ လရည်များကို သူမနို့ပေါ် လွတ်ချသည်။ သူမ ထပ်ထွက်ပြေးရသည်။ မီးဖိုချောင်ဘက် ရောက်လာသည်။ ယောက်ခမကြီးက သူ့ကျောပိုးအိတ်ကြီးဆွဲ၍ မီးဖိုချောင်ထဲ လိုက်လာသည်။ “ခဏ ခဏနားမယ်” “ခဏနားရအောင် ဒါလက်ဝှေ့ပွဲ မဟုတ်ဘူး” ဆိုကာ သူမကို အကုန်ချွတ်သည်။ သူမ အဝတ်များကို ရေချိုးခန်းထဲ ပစ်ထည့်သည်။ နောက် သူမကို နောက်ကနေ ဖက်သည်။ နို့ကို ကိုင်သည်။ အဖုတ်ကို နှိုက်သည်။ သူမတော့ သည်နေ့ နားရမည် မထင်တော့။ အဖုတ်ကို နှိုက်ရင်း ကျောကို နမ်းသည်။ ဖင်ကိုလည်း လီးနဲ့ထောက်ထားသည်။ သူမ မနေနိုင်။ ထို့နောက် သူမကို ထမင်းစား စားပွဲပေါ်တင်ကာ အဖုတ်နှိုက်ရင်း နမ်းသည်။ သူမလည်း ပြန်နမ်းရသည်။ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်။ နို့ကို ဆက်နမ်းသည်။ ကြမ်းသည်။ နို့သီးခေါင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းစုပ်သည်။ နို့အုံကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကိုင်သည်။ အဖုတ်ကိုလည်း လက်နှစ်ချောင်းသွင်း၍ နှိုက်သည်။ နောက် အဖုတ်ကို စုပ်နမ်းသည်။
“တီတီတီ တီတီတီ” ဖုန်းဝင်လာသဖြင့် သူမ ဖုန်းပြေးကိုင်သည်။ ဖုန်းကိုင်တော့ ယောက်ျားဖုန်း ဖြစ်နေသည်။ “ဟဲလို ယောက်ျား” “မိန်းမ အဆင်ပြေလား” “အော် အဆင်မပြေစရာ ဘာရှိလို့လဲ” သို့သော် သူ့ယောက္ခမကြီးက အဖုတ်ထဲ လက်နှစ်ချောင်းနှိုက်နေသည်ကို မပြောဖြစ်။ ယောက်ျားကလည်း ဖုန်းချသွားသည်။ ယောက်ခမက အဖုတ်ကို နှိုက်ရင်း သူမကို ဆက်နမ်းသည်။ ထို့နောက် စားပွဲပေါ် သေချာထိုင်ခိုင်းပြီး အဖုတ်ကို သေချာစုပ်လျက်သည်။ အဖုတ်လျက်လို့ အားရတော့ သူမကိုကြည့်ရင်း နို့ကိုကိုင်သည်။ ပြီးတော့ နွုတ်ခမ်းကို နမ်းသည်။ ထို့နောက် ယောက္ခမကြီးက တဒီဒီမြည်နေသော ဘုလုံးကြီးကို ထုတ်လာသည်။ ဘုလုံးက လည်ထွက်ကာ တုန်ခါနေသည်။ ယောက္ခမက ထိုဘုလုံးဖြင့် နို့အုံကို အပေါ်ကနေ ကိုင်ကာ နို့သီးကို ဖိသည်။ နို့တလုံးအားရတော့ နောက်တလုံးပြောင်းသည်။ နို့နှစ်လုံးအားရတော့ ထိုင်ခုံတွင် သေချာထိုင်ကာ ထိုဘုဖြင့် သူမအဖုတ်ကို ဖိသည်။ ဘုက လေးလက်မပတ်လည်လောက် ကြီးသည်။ အဖုတ်မခံနိုင်။ သူမ ထရပ်သည်။ မရ။ ပြန်ထိုင်ခိုင်းကာ ဘုဖြင့် အဖုတ်ကို ကလိပြန်သည်။ မိုးစုတယောက် တုန်နေသည်။ နွုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းကိုက်ထားရသည်။ မျက်မှောင်တွေကြုံထားရသည်။ နဖူးကြောတွေပါ တင်းနေသည်။
ယောက္ခမကြီးကတော့ဖြင့် ဘုလုံးဖြင့် စောက်ဖုတ်ကို အမျိုးမျိုးထိုးကစားနေသည်။ “သေး သေးပေါက်ချင်လာပြီ” “ပေါက်ချ ပေါက်ချ” မိုးစု မနေနိုင်။ သေးပေါက်ချရသည်။ ထမင်းစားစားပွဲက သေးရွဲသွားသည်။ သူမနွုန်းချိနေတော့ ယောက္ခမကြီးက ပြန်နမ်းသည်။ ထို့နောက် စားပွဲပေါ်က ဆင်းခိုင်းပြီး ဒူးထောက်ခိုင်းကာ လီးကို စုပ်ခိုင်းပြန်သည်။ လီးကို ပါးစပ်ထဲ သိပ်ထည့်ပြီး ခေါင်းကိုင်ကာ လိုးသည်။ ထို့နောက် ထိပ်ကို ငုံထားခိုင်းပြီး လက်ဖြင့် ကွင်းထုခိုင်းသည်။ ခဏကြာတော့ လက်ကို ဖယ်သည်။ သူမ ထိပ်ကို ငုံ၍ ပါးစပ်ဖြင့် ကွင်းထုပေးသည်။ “ရိုးရိုးမငုံပါနဲ့ စုပ်ပြီးတော့ငုံ” မိုးစုက ပါးများချိုင့်နေအောင် စုပ်သည်။ ထို့နောက် လီးထုတ်လိုက်ကာ သူမကို ပေါင်ကြားထဲ ဆွဲသွင်းသည်။ သူမက လပြွတ်ကို ငုံပေးသည်။ အတော်ကြာတော့ လီးထပ်ငုံခိုင်းသည်။ ငုံရုံမဟုတ် ပါးစပ်ဖြင့် ကွင်းတိုက်ပေးရသည်။ ပါးစပ်ဖြင့် အလိုးခံရသည်။ သူမ လီးချည်းငုံ့စုပ်နေတော့ သူမ မျက်နှာကို ဆွဲမော့သည်။ သူမ မော့ကြည့်ပေးရသည်။ သူမကို ဧည့်ခန်းထဲ ခေါ်ပြန်သည်။ ဆိုဖာဆက်တီနောက်မှီကို လက်ကိုင်၍ အရပ်လိုက်ကုန်းခိုင်းသည်။ သူမ အရပ်လိုက် ကုန်းသည်။ နောက်ကနေ လိုးသည်။ လီးကို စိမ်ထားပြီး လိုးသည်။ ခါးစောင်းကိုင်ကာ ဆောင့်သည်။
ခဏကြာတော့ ဘိုးတော်က နားလိုက်သည်။ နားပြီး သူမအိုးကို ရိုက်သည်။ “ဖြန်း ဖြန်း” အိုးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်သည်။ “ပြန်ဆောင့်ပေးလေ” သူမက နောက်ပြန် ပြန်ဆောင့်ပေးသည်။ အရပ်လိုက် နောက်ပြန်ဆောင့်သည်။ နှေးနေ၍လား မသိ။ ယောက္ခမကြီးက ပေါင်ရင်းကိုကိုင်၍ ပြန်ဆောင့်လိုးသည်။ ထို့နောက် သူမ ပေါင်တဖက်ကို ဆိုဖာပေါ်တင်သည်။ သူမ လက်နှစ်ဖက် ခြေတဖက်က ဆိုဖာပေါ်။ တဖက်က အောက်တွင်ရပ်၍ ကုန်းသည်။ သို့နည်းဖြင့် သူမကို လော်သည်။ ထို့နောက် သူမကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် အရပ်လိုက် လေးဖက်ထောက်ကုန်းခိုင်းသည်။ “နည်းနည်းစီ ရှေ့သွား” မိုးစုသည် စောက်ဖုတ်အလိုးခံရင်း အရပ်လိုက် လေးဖက်ထောက်၍ ရှေ့ကို တရွေ့ရွေ့သွားရသည်။ ယောက္ခမကြီးက မသွားလျင်တွန်းသည်။ သွားတာ မြန်လျင် ပြန်ဆွဲသည်။ သူမ ဒူးပင် မခိုင်ချင်။ တရွေ့ရွေ့နဲ့ သွားရင်း လှေကားနားရောက်လာသည်။ သူမကို အပေါ်ထပ်သို့ လေးဖက်ထောက်ပြီး အလိုးခံရလိုက်တက်ရသည်။ အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ အပေါ်ထပ်ဧည့်ခန်းရှိ ဆိုဖာပေါ် သူမကို အိပ်ခိုင်းသည်။ သူမ ပက်လက်အိပ်သည်။ ယောက္ခမကြီးက နို့ကြားကို လိုးသည်။
သူမက ဒီအတိုင်းနေတော့ သူမကို နို့နှစ်လုံး စုခိုင်းသည်။ သူမ စုပေးတော့ နို့ကြားကို လိုးသည်။နို့သီးခေါင်းကိုလည်း လီးနဲ့တို့သည်။ နို့ကို လီးနဲ့ ကစားသည်။ ပြီးလျင် နမ်းသည်။ နွုတ်ခမ်းကိုလည်း နမ်းသည်။ ထို့နောက် ယောက္ခမကြီးက ဆိုဖာပေါ် အိပ်ချသည်။ သူမက အပေါ်ကနေ တက်ခွ၍ လီးကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲထည့်သည်။ ယောက္ခမကြီးက ဝဲကျလာသော သူမဆံနွယ်ကို ကျောဘက်ပို့ပေးသည်။ သူမက ဆောင့်ချသည်။ ယောက္ခမကြီးကလည်း အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်တက်သည်။ “မြန်မြန်ဆောင့်စမ်းပါ” သူမ မြန်မြန်ဆောင့်သည်။ ယောက္ခမကြီးက ဆွဲဖက်ချ၍ နွုတ်ခမ်းချင်း နမ်းသည်။ သူမကိုယ်တိုင် ဆောင့်ချရင်း ပြန်နမ်းသည်။ သူမကို လက်ထောက်ခိုင်း၍ ခပ်မြန်မြန်ပြန်ဆောင့်ခိုင်းသည်။ ထို့နောက် ယောက္ခမကြီးက ဆိုဖာပေါ် ထိုင်ချ၍ သူမကို အပေါ်ကနေ နောက်ပြန် ဆောင့်ချခိုင်းပြန်သည်။ သူမ ထပ်ဆောင့်ချသည်။ ယောက္ခမကြီးက သူမလက်ကို ကိုင်ထားသည်။ နှေးလျင် မြန်အောင် အသိပေးသည်။ သူမ မောလျင် အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်သည်။
ထို့နောက် ယောက္ခမက ထလာပြီး သူမကို ဖက်ထားကာ သူမကို စကောဝှိုက်နည်း သင်သည်။ သူမစကောဝှိုက်သည်။ ထို့နောက် ပြန်အိပ်ချသဖြင့် သူမ ဆောင့်ချသည်။ သူမ မောလာသဖြင့် သူမကို တစောင်းအိတ်ခိုင်းပြီး ဆက်လိုးသည်။ သူမ လေးချီလောက်ပြီးနေပြီ။ ယောက္ခမက ဘာမှ မဖြစ်သေး။ သူမကို ပက်လက်ထပ်လိုးပြန်သည်။ သူမ တုန်ကာ ချိနဲ့နေပြီ။ “အရမ်းမောနေပြီ အရမ်းမောနေပြီ” သူမ ညည်းရသည်။ သို့သော် ယောက္ခမကြီးက မနားပါ။ သူမကို ဆက်လိုးသည်။ သူမမောနေသည် ဆိုသဖြင့် သူမပေါ် ဖိအိပ်ကာ တချက်ချင်းစီ ဆောင့်သည်။ ဆောင့်လိုက်တိုင်း သူမနွုတ်ခမ်းတွေ ကွေးကာ မဲ့ရသည်။ “ကျမ နားချင်တယ် အရမ်းနာနေပြီ” “ဒါဆို ပြီးတော့မယ်” ဆိုကာ ဆက်လိုးသည်။ ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးသည့်နောက် လိုးတာ တစ်နာရီနီးပါး ကြာသည်။ ထို့နောက် သူမအဖုတ်ထဲ လရည်ထည့်သည်။ သူမ ညစ်ထုတ်တော့ အရည်ကြည်သာ ထွက်လာသည်။ “ငါ့ကို လူအိုလို့ထင်သေးလား” “ဟ ဟအင့်” သူမ မောရင်း ဖြေသည်။ ယောက္ခမကြီးက နာရီထိုးပြသည်။ ညနေ ငါးနာရီပင်ထိုးနေပြီ။
“သွား ရေချိုးလိုက်၊ နည်းနည်း အပမ်းပြေလိုက်မယ်၊ ပြီးရင် ဆက်လိုးမယ်” မိုးစုတယောက် ရေချိုးပင် မဖြောင့်တော့။ ရေချိုးပြီး သူမကို ကုတင်ပေါ်တန်းခေါ်သည်။ သူမ အဝတ်ပင် မဝတ်ရ။ သူမနို့ကို စို့သည်။ သူမလည်း ဖီးလ်ရပြန်သည်။ “ကိုကြီး မနားတော့ဘူးလားဟင်” သူမ အချိုသတ်ရသည်။ မရပါ။ ယောက္ခမကြီးက အဝတ်ပြန်ချွတ်သည်။ သူမ အဖုတ်ကို နမ်းသည်။ သူမ ဖင်ကို နမ်းသည်။ ကျောကို နမ်းသည်။ “ဖင်လိုးရဦးမယ်လေ” ယောက္ခမကြီးသည် ထိုည၌ တညလုံး သူမကို လိုးသည်။ နောက်နေ့တွင်လည်း မနားတမ်းလိုးသည်။ ခြောက်ရက်တိုင်တိုင် သူမမှာ အတုနဲ့တွေ့လိုက် အစစ်နဲ့တွေ့လိုက် နားရသည်မရှိဘဲ အလိုးခံရသည်။ ထမင်းပင် မချက်အား။ ကြက်ဥကို အစိမ်းစားလိုက် ကြောက်စားလိုက်နဲ့ အဆာဖြေရသည်။ ဖင်တွေလည်း ကျိန်းစပ်လို့နေသည်။ အဖုတ်တွေလည်း လက်နဲ့ပင် မထိရဲ။ ယောက်ျားပြန်လာမည့်ရက် ခဏနားလို့သာ ထိုည၌ ယောက်ျားက အညိုးနဲ့လိုးတာ ခံနိုင်လေတော့သည် …. ပြီးပါပြီ။